Miyaad iga caawin kartaa inaan doorto saxda keyda muhiimka ah ee Amazon si ay u qaataan hogaanka suuqa?
Iyadoo aan loo eegin qaybta ganacsiga ama qaybta wax soo saarka ee aad iibineysid, waa inaad xajisaa boggagaaga badeecada si aad ufilan si loo helo fursado xooggan si guul leh loo dhameystiro tirada sii kordheysa ee iibinta. Inkasta oo Amazon ay tahay midka ugu weyn ee ganacsiga caalamiga ah iyo iibiyaha maraakiibta deynta ah, waxaad horey u leedahay wax badan oo aad ku dhaqaaqdo, aad u badan si aad ula socoto, iyo wax badan oo aad ku horumarin karto. Marka, sida loo maareeyo dhamaanba waqtigaa qaadashada iyo mararka qaar dhabta shaqa-qabadka ah? Halkan waxaa ku qoran marka la eego ereyga muhiimka ah ee Amazon iyo qalab cilmi baaris tartan ah oo ciyaaraya - testbericht barum bravuris 2 sommerreifen.
Dabcan, ma jiro software kama dambeys ah ama qaab internetka ah oo wax walba oo adiga kugu habboon adiga kugu habboon. Laakiin qalabkan muhiimka ah ee Amazon keywords iyo caawiyayaasha barnaamijyada waxtar leh ayaa ka dhigi kara waxyaabo badan oo sahlan. Ugu yaraan kuwa ku saabsan cilmi-baarista muhiimka ah ee muhiimka ah iyo fikrado qiimo leh oo qiimo leh si aad u adag ayaa loo baahan yahay si looga badbaado goobta suuqa aadka u xeel dheer. Qorshaha Guud ee Google
raadin weyn sida xalka aad ku fiican tahay si aad u sii wadato cilmi-baaris dhamaystiran oo muhiim ah oo laga soo bilaabo bilowgii hore. Waxaan ula jeedaa inkasta oo qalabkan loo yaqaan 'defaultcit default' uusan si gaar ah loogu talagelin in lagu iibiyo on Amazon, weli waa mid aad u faa'iido badan si aad u hesho sawir weyn oo ah isku darka raadinta ee laga yaabo inay isticmaalaan dukaamada dhabta ah adduunka oo dhan, iyo sidoo kale fahamka aasaasiga ah ee walxaha raadinta qaraabo iyo heerka tartan ee hadda, gaar ahaan loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee dheeriga ah ee loogu talagalay.
Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, Qorshaha Keyword Google ee kelmadu waa tallaabada ugu horreysa ee habka aad u qaadayso hogaanka suuqa. Taas macnaheedu waa in dambe, waxaad yeelan doontaa inaad doorato qalabka muhiimka ah ee Amazon key tracker ee xaalad kasta - kaliya inaad ka fogaato marin habaabin leh xog aad u xiisa badan oo laga soo qaaday ilo farabadan oo badan oo aan daruuri ahayn inaad haysato iibsi xoog leh. Inkasta oo qalabka raadraaca keyword-ka Amazon xitaa aan bilaash u aheyn (qiimaha ku dhowaad 20 doolar bishii), waxaa hubaal ah in ay bixiso kharashka ku baxa
, Hubaal. Fikradda muhiimka ah ee fikrada FreshKey waxay noqon kartaa meel wanaagsan oo ugu dambeyntii la socota fikradaha muhiimka ah ee la bartilmaameedsaday, kala duwanaansho farsamo oo kala duwan, LSI ereyada dheer-dheer, iyo sidoo kale qaybta dhabta ah ee la isticmaalo - waxay ka imaneysaa fikradda asalka ah ee Mashruuca Optimization Search. Intii aad iska xakamayn laheyd oo kaliya hal qalab oo aasaasi ah, ama aad ujirto lacag ku saabsan wixii horumarin ah oo aad bixisay, waxaan kugula talinayaa in aad isku daydo FreshKey inay tahay ilaha aan xadidnayn ee keywords keywords iyo wax aad waxtar u leh marka ay timaado ciribtirka ereyada raadin ee dhici karta ee laga yaabo in laga yaabo iyo sidoo kale in la yareeyo kartidaada liiskaaga ee Amazon.
Ugu dambeyn qalabka raadraaca ugu muhiimsan ee Amazon maanta waa Soovle, xal bilaash ah oo sahlan loo isticmaalo si loo ilaaliyo liiska alaabtaada markasta oo aanad waqti badan bixin on cilmi-baarista gacanta. Raadi codsiyada aadka loo baadho ee loo isticmaalo dukaamada iibiya iyagoo samaynaya iibsiyada maalinlaha ah oo kaliya ma ahan Amazon, laakiin dhinaca kale ee caanka ah ee e-macaamiisha, sida eBay ama dukaanka Alibaba. Waxyaabaha kale ee badan - caawiye online wuxuu muujin karaa dhinacyadiisa ugu adag gaar ahaan marka ay timaado maskax furitaanka qadar balaadhan oo ah fikrado muhiim ah oo ra'yi leh isla markaana tijaabinaya isku-darka raadinta ee ugu caansan ee loo isticmaalo dadka isticmaala kuwa ku jira makiinado fara badan oo waaweyn.